ခွင့်လွှတ်ခြင်း အနုပညာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ခွင့်လွှတ်ခြင်း အနုပညာ
Posted by moonpoem on Apr 30, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 20 comments
ခွင့်လွှတ်ခြင်းအနုပညာတဲ့လား။စကားလုံးက ၃လုံးထဲပေမယ့် အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ အနုပညာတစ်ရပ်ပါ။
ခွင့်လွှတ်ခြင်း စစ်မှန်ရင် သူ့ရဲ့အမှားကို ပြန်ပြီးတော့အပြစ်မတင်ရဘူး။
ပြန်ပြီးတော့ မထိုးဆွရဘူး။ပြန်ပြီးတော့ ကလဲ့စား မချေရဘူး။သူ့နောင်တနဲ့သူ သူ့သင်ခန်းစာနဲ့သု သူ့ဘဝသူ ကောင်းမွန်အောင် တည်ဆောက်ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းသည်သာ ခွင့်လွှတ်ခြင်း အစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်။
အဲဒီအတွက် ခွင့်လွှတ်ခြင်း ပြုခံရသူအတွက် စိတ်ကျေနပ်ခြင်းရကောင်းရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ရသူဘက်မှာတော့ တစ်ဘက်က ပြုခဲ့တဲ့ အမှားများရင် များသလောက် ခံစားခဲ့ရပေမယ့် နာကျည်းခြင်းတွေကို မြိုချနိုင်စွမ်းရှိရမယ်။ ခါးသီးမှုတွေကိုသည်းခံနိုင်စွမ်းရှိရမယ်။နာကျင်ခြင်း
ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ ပြန်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါ အောက်တန်းကျပြီး အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ လုပ်ရပ်တွေ အပြစ်တွေကို နှစ်ရှည်လများ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတို့တွေရဲ့
အကြောင်းကို မေ့ပစ်လို့တောင် မရသေးတဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ အတော်လက်လှမ်းဝေးပါတယ်။
အသက်အရွယ်တစ်ခုမှာ အခြေအနေအရ အချိန်အခါအရ တရားဓမ္မအရ ခွင့်လွှတ်ခြင်း အနုပညာဆိုတာကို လက်ခံကျင့်သုံးနိုင်လာခဲ့တဲ့ တစ်နေ့ ကိုယ့်ဘဝကို အေးချမ်းအောင် သူတို့တွေကို ခွင့်လွှတ်ပေးပြီး တတ်နိုင်သမျှ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေသွားမှာပါ။
ဒါပေမယ့် ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာ ဇွတ်အတင်းမေ့ပစ်တာ မဟုတ်တဲ့အတွက် လက်ရှိအချိန်မှာအလိုအလျောက် မေ့မသွားနိုင်သေးတာကိုတော့
စိတ်ထဲက နာကျည်းစွာ လက်ခံမိပါတယ်။
လွယ်တော့ မလွယ်ပေဘူးလေ. . .
Nelson Mandela ကတော့ ပြောဖူးရဲ့
forgive and forget တဲ့
ဇာဂနာကတော့ forgive ပဲရမယ် forget မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့
ခွင့်လွှတ်တာက မေ့ပစ်တာထက်တော့ ပိုလွယ်တယ်လို့ ပြောရမပေါ့…..
ဆိုတော့ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို အရင် အနုပညာမြောက်စွာ ကျင့်သုံးလိုက်ပါဦးလေ…
နာ တော့ ၂ မျိုးပဲ ကျင့်သုံးတယ်။
ချစ်ရင်တော့ ဘာလုပ်လုပ် ပေါ့နော်
အဲဒီချစ်တာမချစ်တာလည်း တစ်မိနစ်လောက် အတွင်း ပြောင်းသွားနိုင်တယ်။
ဒေါ်ကေဇီ နဲ့ အကယ်လို့များ ဆုံခဲ့မယ်ဆိုရင် စက္ကန့်ဝက်ဘဲ ဆုံမယ်။
အကြောင်းဘာမှ မရှိဘူး ..
အတိတ်အကြောင်းတွေကို ခွင့်လွှတ်ခြင်း ခွင့်မလွှတ်ခြင်းထက် လက်ရှိအနေအထားမှာ ပြည်သူတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲလို မဟုတ်ဘဲ သူပြောတာ ဟုတ်သလိုလို ဟို လူပြောသလို လုပ်ရမလိုလို စတဲ့ လိုလိုအားနည်းချက်တွေကြောင့် ကျုပ်တို့တွေကို သူတို့နိုင်စားနေကြ တာပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်.. နစ်နာအောင်.. လုပ်ထားသူကို.. ခွင့်မလွှတ်ရဘူး.. ထိုက်သင့်တဲ့တုံ့ပြန်မှုပေးသင့်တယ်ထင်မိတယ်..။
ခွင့်လွှတ်လိုက်ရင်.. အဲဒီလူမှာ.. အဲဒီစိတ်က.. သံသရာလည်ပြီး.. တခြားသူတွေဒုက္ခပေးနိုင်တာပဲ..။
ကံ… ကံရဲ့အကျိုးအရ.. မိုးပေါ်ကနတ်မင်းကြီးက… နောင်ဘ၀..ဘေးဘ၀..အရှေ့ဘ၀တွေမှာ.. အပြစ်ပေးအောင်မစောင့်ပဲ.. လက်ရှိဘ၀မှာတင်.. ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ.. လက်တွေ့လုပ်ပြပြီး.. လက်တုံ့ပြန်စေချင်..။
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ဗာဂို ဆိုတော့ အညိုးကြီးတယ် ခွင့်မလွတ်တတ်ဝူး လက်စားချေတတ်တယ်…
ဒါပေသိ သူကချောက်တွန်းလိုက်လို့ ကိုယ်ကောင်းစားသွားတာမျိုးတော့ စိတ်ထဲ မှတ်မထားပါဘူး :boss:
နိ ပြောမှ ဗာဂိုတွေ နာမည်ပျက်ပါတယ်အေ
ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပါသေးတယ်…ကိုယ်လည်း ပုထုဇဉ်ပဲရှိသေးတော့
တော်ရုံဆိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်.. အလွန်အမင်း နစ်နာအောင်.. လုပ်ထားသူကိုတော့
လက်စားချေတာ မဟုတ်ဘဲ သူ့အပြစ်သူ သိအောင် နောက်နောင်အမှားလုပ်ဖို့ ဝန်လေးအောင်တော့ သင်ခန်းစာပေးချင်မိတာကတော့ အမှန်ပဲဗျ။
သင်ခန်းစာရစေချင်တဲ့ စိတ်ကိုတော့ ထောက်ခံတယ်။
ကိုယ်နဲ့ လက်ရုံးရည်၊ နှလုံးရည် စသဖြင့် ကွာခြားသူနဲ့ ဖက်ပြိုင်/ယှဉ်ပြိုင် မနေသင့်ဘူး။
​လောကမှာ အဲ့လို ဂျီး ​ခွေးလွှတ်​ အဲ့ ခွင့်​လွှတ်​တတ်​တဲ့သူ ခွင့်​လွှတ်​နိုင်​တဲ့သူက ရှာ​လေ ရှား​လေပဲ ။ မိဘက သားသမီးကို ခွင့်​လွှတ်​တာက လွဲရင်​​ပေါ့ ။ ။ ဒါကလည်း ​ဗမာ့ လူ​နေမှု စရိုက်​မှာပဲ ​တွေ့ ရတတ်​တာပါ ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်​ရာ မဟုတ်​ ။ အားလုံးသာ ခွင့်​လွှတ်​ရမယ်​ဆိုရင်​ တစ်​​ယောက်​ကို တစ်​​ယောက်​ က ခွင့်​လွှတ်​​နေကြမယ်​ဆိုရင်​ ကမ္ဘာကြီး ဘာဖြစ်​သွားမလဲ ။ ကျုပ်​က​တော့ ကမ္ဘာကြီး​တော့ မသိဘူး ။ လက်​ရှိ မြန်​တျန့်​ ပြည်​နယ်​​လေး​တော့ ကမ္ဘာ​ပေါ်က ​ပျောက်​သွားမယ်​လို့ ယုံကြည်​တယ်​ ။ အဲ့​တော့ ခု​လော​လောဆယ်​ ကိုယ်​အ​ပေါ် မ​ကောင်းတဲ့သူ အနိုင်​ ကျင့်​ခဲ့ဖူးသူ​တွေကို ခွင့်​လွှတ်​မဲ့ အစား ​ခွေးလွှတ်​ပြီး ရှူး တိုက်​လိုက်​ဦးမယ်​ ။
ခွင့်လွှတ်ခြင်း အနုပညာ ကို တတ်မြောက်ဖို့အတွက်
သတိ .. ပဲလို့ ထင်သဗျ …..
ဟီးဟီး … ဝင်ပွားကျိဒါ …
ဘာမှပြန်ပြင် လို့ မရမယ့် အတူတူခွင့်လွှတ်ပေး
လိုက် တာက စိတ်ချမ်းသာမှုတစ်ခုပဲ
ကံတရားက တော့ သူ့ ကိုပြန်လက်စားချေမှာပဲ
ကျွန်မ ဘဝမှာလည်း ကိုယ့်အမှားကို နားလည် ခွင့်လွှတ်ပေးဘူးတာ မိဘကလွဲရင် မရှိဘူးသေးပါဘူး။အခြားသောသူများကေ
တာ့ မမှားခင် lesson ပေးတာတောင်ရှိသေး။
ခွင့်လွှတ်ပါ…မမေ့ပစ်ပါနဲ့ လို့ ကြားဖူးပါတယ်…။
ခံခဲ့ရဖူးတာကို မေ့ ပြစ်လိုက်ကြတာများပါတယ်…။
ဒါကြောင့်လည်း… …. …. …. ။